Zavatra tsy rariny amin'ny siansa amin'ny filma
Manantena fiovana amin'ny sarimihetsika momba ny siansa ianao satria izy ireo dia fiction. Saingy misy zavatra maro hino azonao raisina alohan'ny filalaovana sarimihetsika iray dia mamakivaky ny tsipika manjavozavo ho lasa mahatsikaiky. Angamba ianao iray amin'ireo vintana vitsy izay afaka mifindra amin'ny fahadisoana ary mbola mankafy ny horonantsary. Ny ambiny aminay dia mandositra mankany amin'ny fiondranana na mamita ny bokotra amin'ny Netflix. Na dia misy fahadisoana tsy hita isa natao tamin'ny tantaram-piraharahana aza, andao hijery ny sasantsasany amin'ireo fahadisoan'ny siansa malaza indrindra (malahelo) indrindra.
Tsy afaka mandre feo amin'ny toerana ianao
Andeha hojerentsika izany: ny habakabaka amin'ny sarimihetsika momba ny siansa dia tsy mahagaga raha tsy misy feo. Na izany aza, izany no zava-misy. Ny feo dia endrika endri-javatra izay mitaky fampahalalam-baovao mba hanaparitahana. Tsy misy rivotra? Tsy misy " pew-pew-pew " laser lasopy, tsy misy fipoahana mandrobona rehefa misy fipoahana. Ny horonantsary "Alien" dia nahatonga azy io ho marina: Ao amin'ny habaka, tsy misy olona afaka mandre anao mihiaka.
Tsy mety mandalo ny tany ny fiakaran'ny hafanana
Na dia azo avela ho lasibatra aza ny laser sy ny fipoahana noho ny fisian'ireo horonantsary mampientanentana kokoa, ny fiheverana hoe ny fiakaran'ny mari-pahaizan'izao tontolo izao dia mety ho "Waterworld" dia manahirana satria maro no mino izany. Raha rendrika avokoa ny ranomandry sy ny glioketsa rehetra, dia miakatra tokoa ny haavon'ny ranomasina, tsy hitsangana fotsiny izy raha handenana ny planeta. Ny haavon'ny ranomasina dia mety hahatratra roa metatra. Eny, mety ho loza ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka izany, fa hahatonga an'i Denver ho lasa fananan-tany ve? Tsy dia be loatra.
Tsy afaka mamonjy olona izay miala amin'ny trano iray ianao
Azonao atao ny manangona saka na zazakely izay latsaka avy amin'ny trano faharoa na fahatelo. Ny hery izay na ny zava-mitranga rehetra dia mamely anao dia mitovy amin'ny fotoana mampiakatra azy . Ny fiakarana avy amin'ny haavon-tsetroka dia tsy mahatsiravina loatra, ary ny tananao dia afaka manao zavatra ho toy ny vongan-doha.
Ny famonoana mahery fo dia lasa mihabetsaka kokoa noho ianao miha-ambony noho ianao manana fotoana hanatrarana ny haingam-pandeha. Raha tsy mijaly amin'ny fo ianao amin'ny fampihorohoroana, tsy ny fianjeranao no mamono anao. Io ilay fiantsonana nianjera. Hainao? Raha misy superhero rasao aorinanao hamongotra anao hiala amin'ny tany amin'ny fotoana farany azo atao, mbola mbola maty ianao. Ny fitsangatsanganana eo amin'ny sandrin'i Superman dia hanaparitaka ny vatanao manoloana ny akanjo tsara tarehy spandex mahafinaritra fa tsy ny lampihazo satria hitifitra mafy ny Man amin'ny Steel ianao tahaka ny hamelezana ny tany. Ankehitriny, raha manenjika anao ny Superhero iray, manintona anao, ary mihamitombo, dia mety haharitra ianao .
Tsy afaka miala amin'ny fotsy mainty ianao
Getty Images / DAVID A. HARDY / SCIENCE FOTO LIBRARY
Ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa fa tsy mavesatra amin'ny Moon (manodidina ny 1/6) sy Mars (manodidina ny 1/3) ary bebe kokoa amin'ny Jupiter (in-2 misimisy kokoa), kanefa hahita olona izay mihevitra ny habakabaka na olona iray ianao miaina lavaka mainty . Manao ahoana ny lanjanao eo amin'ny Moon mifandraika amin'ny sisa velona amin'ny lavaka mainty? Ny lavaka mainty dia mampihetsi-po lalina mafy ... lamina lehibe kokoa noho ny an'ny Masoandro. Ny Masoandro dia tsy paradisa fialan-tsasatra, eny fa na dia tsy nafana loatra aza ny nokleary satria navesatra indroa in-droa. Hiposaka toy ny bibikely ianao.
Tadidio koa fa ny halatra lehibe dia miankina amin'ny elanelana. Ny boky sy ny siansa momba ny siansa dia mety tsara. Arakaraky ny maha-ianao anao amin'ny lavaka mainty, ny safidinao kokoa ny manapaka maimaim-poana. Saingy, rehefa manakaiky ny maha-tokana azy ianao, dia miova ny ampahany amin'ny habak'ilay halavirana mankany aminy. Na dia mety ho tafavoaka ny herimpo goavana aza ianao, dia tokony hanitra ianao noho ny fahasamihafana eo amin'ny herin'ny maingoka amin'ny ampahany iray amin'ny sambonao na ny vatanao raha ampitahaina amin'ny hafa. Raha efa teo amina iray amin'ireo mpamily fiaramanidina mpiady izay mamelatra anao amin'ny 4 g ianao, dia ho takatrao ny olana. Raha mandroso ianao ka manindrona ny lohanao dia mahatsapa ny fahasamihafana amin'ny Gs ianao. Mampalahelo izany. Ataovy izany eo amin'ny sehatry ny cosmic, ary mahafaty izany.
Raha tafavoaka velona amin'ny lavaka mainty ianao, mety hiafara amin'ny tontolo iraisana ve ianao? Tsy mety, saingy tsy misy tena mahafantatra tsara.
Tsy afaka manatsara sary ianao
True Color Films / Getty Images
Ity hadisoana manaraka momba ny siansa ity dia mifamatotra amin'ny fitsangatsanganana fitsikilovana, ary koa ireo boky momba ny siansa sy ny sarimihetsika. Misy sarin'ny sarimihetsika na horonan-tsarin'ny olona iray, izay mivezivezy amin'ny ordinatera amin'ny alalan'ny programa iray mba hanamboarana sary iray mazava. Miala tsiny, fa ny siansa dia tsy afaka mampiditra angona izay tsy ao. Ireo fandaharan'asan'ny ordinatera dia manelanelana eo anelanelan'ny voamadinika mba hanamboarana ilay sary, saingy tsy manome tsipiriany izy ireo. Mety hampiasana sary vetaveta ve ny fampitomboana ireo olona ahiahiana? Antoka. Afaka manatsara sary ve ny sary iray? Tsia.
Ankehitriny, misy fakantsary izay mamela anao hanitsy ny fifantohana rehefa vita ny sary. Ny olona manam-pahaizana iray dia afaka manaloka izany sary izany amin'ny fanovana ny fifantohana, fa izany dia mampiasa ny angona izay efa ao anaty rakitra, fa tsy mampiasa algorithm. (Mbola mahafinaritra foana izany.)
Aza manaisotra ny fiarovan-tenanao amin'ny planeta hafa
Mipetraka any amin'ny tontolo hafa ianao, ny manam-pahaizana momba ny siansa dia mamakafaka ny rivotra iainan'ny planeta ary manambara fa manankarena amin'ny oksizenina, ary ny rehetra dia manala ireo fiarovan-doha manelingelina. Tsia, tsy hitranga mihitsy. Ny atmosfera dia mety misy oksizenina ary mitoetra ho mahafaty. Ny oksizenina be loatra dia mety hamono anao , ny gaza hafa dia mety ho poizina, ary raha manohana ny fiainana ny planeta, dia ny rivotra iainana no hahatonga anao hanimba ny tontolo iainana. Iza mihitsy no mahafantatra izay mikraoba mikendry anao. Rehefa mitsidika ny tontolo hafa ny olombelona, ​​dia tsy ho azo atao ny fiarovan-doha.
Mazava ho azy, tsy maintsy misy ny soso-kevitra hanesorana ny fiarovan-dohany amin'ny sarimihetsika satria tena, iza no te hijery ny fisainana tsy misy fiafarany?
Tsy afaka mahita lasera eny amin'ny habakabaka ianao
Tsy mahita lasitra eny amin'ny habakabaka ianao. Amin'ny ankapobeny, tsy afaka mahita lasam-be ianao , ary izao no antony:
Ny Cats dia tsy manapaka ny aterineto ary mamaky ity lahatsoratra ity amin'ny aterineto ianao, ka na dia tsy manana feline aza ianao dia mahatsapa ny fitiavan'ny saka amin'ny fanenjehana ny Red Dot. Ny lasitra mena dia novolavolain'ny laser tsy lafo. Teboka izany satria ny laser-nify tsy mandeha amin'ny herinaratra dia tsy mifandray amin'ny ampahany kely amin'ny rivotra mba hamokarana andalan-jiro hita maso. Ny laser-hetra mahery kokoa dia mandefa sary maromaro kokoa, noho izany dia misy fahafahana bebe kokoa hialana amin'ny vovoka marevaka ary ny vintana lehibe kokoa hahitana ny beam.
Fa, ny vovoka vovoka dia vitsy ary lavitra eo anelanelan'ny vaksin-tany . Na dia mihevitra ny laser izay manapaka amin'ny kamiao aza dia tena mahery vaika, tsy hahita azy ireo ianao. Ny laseran'ny fitaovam-piadiana mety ho tapaka amin'ny hazavana mahery vaika eo ivelan'ny sehatra hita maso, ka tsy fantatrao velively hoe inona no namely anao. Ny laser tsy hita maso kosa dia maneso amin'ny sarimihetsika.
Fiovan'ny toetr'andro rehefa mipoitra ny gaza
"Ny Andro Taorian'izay" dia nandeha niaraka tamin'ny teorian'ny fikorontanan'ny toetr'andro ny fiovan'ny toetr'andro . Na dia misy lavaka betsaka aza ny siansa momba an'io flick io, dia mety ho hitanao fa ny hafanam-pandehan'ny seranana New York dia nanodikodina azy io ho toy ny lalamby goavam-be iray. Raha afaka manalefaka rano goavam-be ianao, dia hitatra izany. Ny herin'ny fipoahana dia hanorotoro sambo sy tranobe ary hampiakatra ny haavon'ny ranomasina.
Raha efa nisotro toaka be loatra, labiera na rano tavoahangy ianao, dia fantatrao fa ny tranga tsara indrindra dia zava-pisotro mamon-drongony. Na dia miha-matanjaka aza ny entana amin'izao andro izao, ny tavoahangy na tsia matevina dia mety hipoaka ivelany ary mety hipoaka. Raha manana rano lehibe kokoa ianao hanombohana, dia mahazo vokatra lehibe ianao rehefa miova ao anaty ranomandry izany rano izany.
Ny ankamaroan'ny sarimihetsika siantifika momba ny siansa izay manala ny taratra na ny endriky ny mangatsiaka maimaim-poana dia manova ny rano amin'ny ranomandry, tsy misy fiovan'ny volombava, fa tsy ny fomba fiasan'ny rano.
Ny fanesorana ny milina dia tsy manakana fiaramanidina
Nenjehin'ny olon-dratsy ratsy ianao, ka mametraka azy io ho fehikibo asterôida, manapaka ireo fitaovam-piadiana, manakana ny sambo, ary milalao ny maty. Hijery toa vato hafa ianao, sa tsy izany? Wrong.
Ny faharesen-dahatra dia tsy ho faty akory fa raha maty ianao, satria rehefa manapaka ny milina dia mbola manjavona ny sambon-danitra, noho izany dia handresy vato ianao. "Star Trek" dia tena tsy niraharaha ny Lalàn'ny Motion voalohany nataon'i Newton , saingy efa in-jato ianao no nahita izany hatramin'izay tao amin'ny fampisehoana sy horonan-tsary hafa.
Mila mianatra any amin'ny oniversite ny kilasin'ny sekoly ambony
Mamadika kibika amin'ny litera
Hoditry Hydrogen vs Atomic Bomb
Famoronana olana ara-panafody
Valan-dresaka ho an'ny mpanendrikendrika
Toaka misy poizina tsy misy sakafo
Kolontsaina Gemstone sy metaly tetezamita
Toerana Hira ao amin'ny efitrano fianarana: lesona iray ho an'ny mpampianatra
Ratra ho an'ny fanasitranana: Olomasina sy fahagagana
Ny zava-mahadomelina mifangaro amin'ny zaza maty
Inona no atao hoe scooter feno?
Vary sy Very
Ahoana no hamaritra ny lokon'ny lokon-doko amin'ny dikan-tsoratra dizitaly
Ny tantaran'i Henry Ford
Ny endriny sinoa lehibe indrindra
Virginia sy Washington DC kayaking, canoeing and rafting
Adiresin'ny Lawrence University
Ahoana no fomba hitsaboana ny fiatraikan'ny lalana
19 Fitsipika Epikônina Fantatrao avy amin'ny Homeric Epic
U - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Tsara tarehy sy marika tsara vintana
Fampidirana ny Parite Power
Famintinana ny 'Christmas Christmas'
Toe-karena sy varotra ny Maya fahiny
Inona no atao hoe fanafohezana? Famaritana sy ohatra
Ahoana no holaza raha misy ny rakitra ao Perl
Masiaka sy dihy Koreana nentim-paharazana